Maleeshiyada ISIS oo sheegatay masuuliyada dilka saddex qof oo Itoobiyaan ah oo ka dhacay Boosaaso - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandMaleeshiyada ISIS oo sheegatay masuuliyada dilka saddex qof oo Itoobiyaan ah oo ka dhacay Boosaaso
Maleeshiyada ISIS oo sheegatay masuuliyada dilka saddex qof oo Itoobiyaan ah oo ka dhacay Boosaaso
October 2, 2018 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Magaalada Boosaaso. [Sawir Hore]
Boosaaso-(Puntland Mirror) Maleeshiyada ISIS ayaa sheegatay masuuliyada dilka dad Itoobiyaan ah oo ka dhacay magaalada Boosaaso.
Bayaan ay baahisay warbaahinta ISIS ee Acmaaq, ayay ku sheegtay in dagaalyahanada maleeshiyadu ay toogteen saddex qof oo Itoobiyaan ah fiidnimadii Isniinta gudaha magaalada Boosaaso.
Waxa uu noqonayaa weerarkii kowaad oo ay ISIS qaado oo ka dhan ah dadka ajaaniibta ah ee ku sugan gudaha Puntland.
Dabayaaqadii bishii lasoo dhaafay, sargaal katirsanaa ciidamada ilaalada madaxtooyada Puntland ayaa lagu dilay Boosaaso, waxaana masuuliyada sheegatay ISIS.
Maleeshiyada ISIS ayaa kacdoonkeeda gudaha Puntland bilowday dabayaaqadii sanadkii 2015-kii kadib markii ay ka goosatay garabka Al-Shabaab ee ku sugan Buuraha Galgala ee gobolka Bari.
Wasiir dowlihii hore arrimaha deegaanka Soomaaliya oo Muqdisho lagu aasay
Muqdisho-(Puntland Mirror) Wasiir dowlihii hore ee arrimaha deegaanka Soomaaliya, Burci Maxamed Xamsa kaasoo lagu dilay weerar ay al-Shabab ku qaaday Sabtidii lasoo dhaafay huteel kuyaala Muqdisho ayaa maanta lagu aasay magaalada Muqdisho. Xamsa ayaa [...]